Cây bồ đề: Tác dụng, ý nghĩa phong thủy, nên trồng cây ở đâu tốt nhất? | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây bồ đề: Tác dụng, ý nghĩa phong thủy, nên trồng cây ở đâu tốt nhất? | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây bồ đề: Tác dụng, ý nghĩa phong thủy, nên trồng cây ở đâu tốt nhất? | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi weBodhi sesinye sezityalo ezithandwayo zokuhombisa eVietnam. I-Bodhi ayizisi nje ixabiso lobuhle kodwa inentsingiselo engcwele kunye nentsingiselo ye-feng shui. Ngoko ngaba unokuqonda okucacileyo kweempawu, iziphumo okanye indlela yokukhulisa umthi weBodhi? Masifunde ngakumbi malunga nomthi weBodhi kwinqaku elingezantsi!
1 Ukwazisa umthi weBodhi
1.1 Ingaba umthi webodhi unazo iintyatyambo?
1.2 UBodhi udume ngantoni?
1.2.1 Yenza i-bonsai yokuhlobisa ukudala i-landscape, yenza umthunzi
1.2.2 Hlambulula umoya, ukhusele indalo
1.2.3 Imithi yexabiso lezoqoqosho
1.2.4 Ukusetyenziswa kwamayeza
2 Umthi weBodhi intsingiselo
2.1 Imvelaphi kunye nentsomi yomthi weBodhi kwiBuddhism
2.2 Intsingiselo ye-feng shui ye-Bodhi
3 Ukusasaza njani i-bodhi
4 Ukhula njani umthi we-bodhi
5 Iindlela zokunyamekela i-Bodhi
5.5 Ukucoca kunye nokuthena amasebe
5.6 Ukuthintelwa kwezinambuzane kunye nezifo
6 Lithini ixabiso lokuthengisa lomthi weBodhi?
Ukwazisa umthi weBodhi
Umthi weBodhi waziwa ngokuba ngumthi wokukhanya, umthi kunye negama lesayensi nguFicus Religiosa. Umthi luhlobo lwe-Ficus. Imvelaphi yomthi weBodhi ukusuka kumzantsi-ntshona weChina, eIndiya, eIndochina empuma ukuya eVietnam.
Izityalo zikhula kwaye zikhule ngokukhawuleza. Ngexesha elifanayo, kunye neempawu zokukhanya kunye nokulula ukuziqhelanisa, eVietnam, umthi ukhuliswe kuyo yonke imimandla.
Umthi weBodhi ngumthi omkhulu, xa unyamekelwa kakuhle, umthi unokufikelela kubukhulu obukhulu kunye nobude obungaphezu kwama-30m kunye nesiqu esinobubanzi obuyi-3m. Isiqu sinexolo elirhabaxa elingaphandle, elimdaka okanye elingwevu, kunye nenkuni eyomeleleyo engaphakathi. Umthi we-Bodhi uneempawu ezininzi ze-branching kunye ne-branching, kwaye ukusuka kwisiqu esiphambili kukhula iingcambu ezininzi ezinde ezikude ngokuthe ngcembe zitshona emhlabeni, amagqabi abanzi kakhulu kwaye axinene.
Amagqabi e-Bodhi alula, amagqabi ahlukanisiweyo. Inencam yamagqabi emile okwentliziyo, etsolileyo kunye nede. Amagqabi abomvu obomvu xa esemancinci kwaye ajika abe luhlaza mnyama njengoko ekhula. Umphezulu uphakanyiswe ngemithambo emile okweenyawo zikanomyayi eyenza amagqabi abe nophawu olwahlukileyo. Ubude besiqu bumalunga ne-6 – 10cm, ububanzi buyi-4.5cm kwaye ubude ukusuka kwincam yegqabi ukuya kwisiqu bu malunga ne-2 – 5cm.
Ngumthi oluhlaza wesiqingatha sonyaka ophelelwa ngamagqabi ekwindla, kodwa nokuba kunjalo, kuhlala kukho amagqabi aluhlaza emthini.
Ingaba umthi webodhi unazo iintyatyambo?
Iintyatyambo zeBodhi ziqala ukudubula ekupheleni kukaJanuwari kwaye zihlala kude kube ekuqaleni kukaMeyi. Intyatyambo ye-bodhi ebomvu itsala amehlo kakhulu kwaye inemilo embhoxo okanye e-elliptical.
Isiqhamo seBodhi sikwakhula ngokwamaqela ancamathela kufutshane nesiqu njengeentyatyambo kwaye aphantse angabinasiqu. Xa sisencinci, isiqhamo siluhlaza kwaye sijika sibe mfusa xa sivuthiwe. Isiqhamo seBodhi singqukuva sinobukhulu obuncinci, 1.5-2cm ububanzi. NgoMeyi-Juni xa iintyatyambo ziphela, ixesha leziqhamo liqala.
UBodhi udume ngantoni?
Yenza i-bonsai yokuhlobisa ukudala i-landscape, yenza umthunzi
Ngokuqinisekileyo baninzi abantu abangaziyo ukuba yintoni na umthi weBodhi. Ukusetyenziswa kokuqala xa kukhankanywa umthi ukuhombisa izitrato, iipaki, phambi kweekhefi, iivenkile zokutyela, njl.njl kunye nophawu lwamahlamvu abanzi, umthi uya kunika umthunzi, ukudala umoya omhle.ukhululekile, indawo epholileyo, ngakumbi iintsuku zasehlotyeni ezishushu.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, umthi uphinde utyalwe kwiimbiza, amasebe agobileyo, agawulwe ukwenza imithi yebhonsai yokuhlobisa iindawo ezincinci zegadi zangaphakathi, ezibekwe phambi kweveranda, ikhampasi yenkampani, iivenkile zokutyela, imivalo, njl.
Hlambulula umoya, ukhusele indalo
Ngaphandle kokusetyenziswa njengomhombiso wegadi, ibhonsai ikwanegalelo ekukhuselweni kwendalo. Ngenxa yokuba i-Bodhi inokulawula kwaye ihlambulule umoya xa ifunxa iigesi ezinetyhefu, uthuli kunye nokukhulula i-oksijini kwindawo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, imithi ikwanceda ekunciphiseni ingxolo ngokufanelekileyo. Ngoko ke, imithi izisa umoya, indawo epholileyo enomoya omtsha nomnandi kuthi. Ngoko ke, lo mthi uyathandwa ngabantu abaninzi kwaye utyalwa kakhulu kuyo yonke indawo.
Imithi yexabiso lezoqoqosho
Umthi we-Bodhi uyathandeka, ngoko ke usike kwaye ugobe, uwunyamekele, uya kwenza umthi omhle webhonsai, othandwa ngabantu abaninzi. Imithi enjalo inokuthengiswa, kuxhomekeka kwindlela onjani ngayo umthi, ixabisa amakhulu aliqela okanye kwaneebhiliyoni ezimbalwa zeedong.
Umthi we-Bodhi uneempawu ezibalaseleyo ezinjengomtyibilizi, nkqu neenkozo, i-warping encinci, ithambile kwaye ihlala ixesha elide. Ngenxa yomgangatho omhle wenkuni, umthi uyatyalwa kwaye uxhatshazwe kwimithi, esetyenziselwa ukuvelisa imisebenzi yezandla, ifenitshala kunye nezinto zendlu, njl njl. Kunye noko, umthi we-bodhi uyinto ekrwada kwishishini. , njl.
Ukongeza, i-resin yomthi we-bodhi nayo inesicelo sayo. Ngenxa yevumba layo elipholileyo nelicacileyo, intlaka isetyenziswa kwishishini leziqholo okanye isetyenziselwa ukukhupha ioyile enevumba elimnandi. Iplastiki ikwasisiqhumiso – incasa edumileyo yamayeza.
Enye yezona zinto zisetyenziselwa kakhulu i-Bodhi, eli liyeza elixabisekileyo leyeza, elisetyenziswa ngokubanzi kumayeza esintu, ukuthomalalisa iintlungu, ezithathwe ukunyanga izifo ezininzi ezahlukeneyo.
Iimpawu eziphezulu ze-antiseptic ekubunjweni kwesivakalisi zinceda ukunyanga izifo zesikhumba ezivuthayo ezifana nezilonda, i-scabies kunye nokwandisa ukukhuseleka, ukunciphisa intlungu. Ngelo xesha, isityalo sinegalelo kunyango lwezifo zokuphefumla kunye nezamathumbu ezifana ne-asthma, isifo sohudo, isifo seswekile, njl.
Iyeza lesintu, isiqhumiso, lenza amayeza amaninzi omlomo ukunceda ukukhupha, ukuthoba igesi, nokuthomalalisa ingqondo, ngoko ke isetyenziswa rhoqo kwabo babethwa yimimoya emdaka okanye umoya.
Umthi weBodhi intsingiselo
Imvelaphi kunye nentsomi yomthi weBodhi kwiBuddhism
Ngokwamaxwebhu amadala amaBhuda, umthi weBodhi unentsingiselo engcwele kwaye udlale indima ebalulekileyo kubomi bukaBuddha – inkosana yaseIndiya egama linguSiddhartha Gautama. U-Shakyamuni Buddha wayehleli phantsi komthi we-Bodhi ecamngca kwaye ngokuthe ngcembe wazikhanyisela iimfundiso zobuBhuda. Emva kokuba eyibonile inyaniso, waya kufundisa ubuBhuda kulo lonke elaseAsiya.
Ngenye imini, inkosana yaseIndiya uSiddhartha Gautama yaphuma yaza yabona iindidi ezine zabantu: umntu ozidlayo, ogulayo, ixhego nomzimba ofileyo. Benza inkosana yaseIndiya ukuba iqonde kwaye ikholelwe ukuba ubomi sisangqa sokubandezeleka. Ke ngoko, wagqiba kwelokuba alahle isikhundla sobutsha, ancame ubomi obutofotofo, abe ngumntu othanda ukonwaba, aphume, ahlole umhlaba kwaye afunde.
Ebudeni kolo hambo, wayesoloko ezila ukutya aze azinyanzele ukuba azilolonge. Kwangaxeshanye, uqhelisela ukucamngca ukuze agxininise umzimba wakhe neengcinga. Emva kweentsuku ezingama-49 zokucamngca, uSiddhartha Gautama wafikelela kolona khanyiselo luphakamileyo lokugqibela waza waba nguBhuda-Obekekileyo ehlabathini.
Malunga ne-300 BC, i-monk yaseBuddha kunye nonongendi bathatha isebe lomthi we-Bodhi othathwe kumthi wokuqala apho uBuddha wayehleli khona ngokucamngca waza wazisa eSri Lanka ukuba atyale. Kuze kube namhlanje, loo mthi weBodhi usekho kwaye ukhula e-Anuradhapura, eSri Lanka. Kwaye lo ngowona mthi udumileyo kunye nomdala weBodhi emhlabeni.
Intsingiselo ye-feng shui ye-Bodhi
Ayinayo nje intsingiselo engcwele kwiBuddhism, kodwa umthi weBodhi nawo uneentsingiselo ze-feng shui. UBodhi ufuzisela ukuphaphama, indlela ethe tye nengcwele yobomi. Kwi-feng shui, umthi weBodhi uthetha izinto ezilungileyo. Umthi unceda ukugxotha imimoya emibi, ukuzisa inhlanhla noxolo kumnini.
Ukusasaza njani i-bodhi
Umthi weBodhi uthathwa njengolula kakhulu ukusasaza ngeendlela ezilula ukusuka kwimbewu kunye nokusikwa. Indlela nganye ineenzuzo zayo, imida kunye nezilumkiso. Kodwa okwangoku, abantu bahlala besebenzisa indlela yokusika i-clonal kunezinye iindlela.
Kwindlela yokusika, kuyimfuneko ukukhetha amasebe angenawo amadala okanye amancinci, angabikho kwizinambuzane. Eyona nto ifanelekileyo ngamagatsha aphilileyo ekhekhe, ukuba iqhakazile, iya kuba ngcono ngakumbi.
Ukuba nabani na ufuna ukuhlwayela imbewu, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo ekukhetheni imbewu eqhelekileyo, etyebileyo, engqukuva nengenazo izitshabalalisi nezifo, ukuphucula amazinga okuphila kunye nokuvelisa izithole ezisemgangathweni.
Ukhula njani umthi we-bodhi
Umthi weBodhi uthanda ukukhanya, unokunyamezela ukubanda kakuhle kwaye unamandla anamandla, ngoko kulula kakhulu ukukhula. Ingqalelo kufuneka ihlawulwe ekukhetheni indawo yegadi epholileyo enokukhanya okuninzi kunye nomthunzi omncinci ukunceda izityalo zikhule kwaye zikhule kakuhle. Ngokomzekelo, xa ukhulisa imithi ye-bodhi ngaphakathi kwindlu, kufuneka ibekwe kwindawo apho ukukhanya, njengakufuphi neengcango kunye neefestile.
Okokuqala, kufuneka ukhethe umhlaba ofanelekileyo ukuze isityalo sikwazi ukukhula. I-Bodhi ilungelelanisa kwaye ikhule kakuhle kwindawo efumileyo, enemingxuma, enesondlo esiphezulu. Owona mhlaba ufanelekileyo kwi-bodhi yifama.
Emva koko, kuyimfuneko ukulungiselela umngxuma wokutyala kwaye ukhethe ibhodwe. Umngxuma kufuneka ugrunjwe malunga ne-50 x 50 x 50cm okanye kabini ubukhulu bomthi. Malunga nenyanga eyi-1 ukomisa umgodi, kuyimfuneko ukusebenzisa i-lime, isichumisi esiphilayo kunye nazo zonke iintlobo zomgquba, i-coconut humus emngxunyeni. Nika ingqalelo ukucoca ingca ejikeleze umngxuma.
Ekugqibeleni, kufuneka ususe isigqubuthelo sembiza kwaye usibeke phakathi komngxuma wokutyala olungiselelwe. Gcwalisa ngomhlaba ojikeleze isiseko kwaye ucinezele kancinci umthi ukuze uhlale uthe tye, umaleko womhlaba uzaliswe ukuya kwi-2cm ngaphezu kweliso lesiseko.
Emva kokutyala, wunkcenkceshele umthi ngamanzi kwaye ungasebenzisa iinkuni ezininzi ukuwujikeleza ukuze umthi ungawi xa kukho imimoya ebhudla ngamandla.
Iindlela zokunyamekela i-Bodhi
Ayisiyiyo kuphela indlela yokukhulisa umthi we-Bodhi elula, kodwa ukhathalelo alukho lukhuni kwaye aluthathi ixesha elininzi. Gcina nje ukhumbule amanqaku ambalwa ekunyamekeleni ukunceda umthi we-Bodhi ukhule kwaye uphuhlise kakhulu.
Ngenxa yokuba isityalo sithanda ukukhanya, iimfuno zokukhanya zomthi weBodhi zibaluleke kakhulu. Ngoko kuyimfuneko ukuqinisekisa ukukhanya kwindawo apho umthi utyalwe khona ngokucoca utshani phantsi kwesiseko kunye nokucoca amagatsha amade ajikelezileyo. Ngale ndlela isityalo asiyi kuvalelwa kuko konke ukukhanya.
I-Bodhi inokunyamezela okubandayo, kodwa ukunyamezela ubushushu obuphezulu kulinganiselwe. Obona bushushu bufanelekileyo bokukhula kwesityalo bumalunga ne 15 – 36 degrees celcius.
Nkcenkceshela rhoqo kwinqanaba elitsha lokutyala, izityalo ezincinci ukugcina umhlaba ufumile kwaye uqinisekise ukukhula kwezityalo. Noko ke, nikela ingqalelo ekunkcenkcesheleni kakhulu, nto leyo enokukhokelela ekungangeni kwamanzi aneleyo, izityalo ezizaliswe ngamanzi, ukubola kweengcambu, kwanokufa. Ngeli xesha, kunokwenzeka ukunkcenkceshela rhoqo ngeentsuku ezi-2, ukuguquguquka ekuseni okanye ngokuhlwa. Nika ingqalelo ekhethekileyo ukuphepha ukunkcenkceshela izityalo emini, ngakumbi kumaqondo obushushu aphezulu, ukuphepha ukothuka kobushushu kunye nokufa okuluhlaza.
Xa umthi uvuthiwe, nciphisa umthamo wokunkcenkceshela, amanzi nje emvula yendalo minyaka le anele. Kodwa qaphela ixesha apho iimeko zemozulu zishushu, zomile okanye ngaphandle kwemvula ixesha elide, kuyimfuneko ukongeza ngokukhawuleza amanzi kwizityalo ukuphepha isomiso kunye nokubola.
Isichumiso kufuneka sigalelwe ngamaxesha athile kwaye kufuneka sixhomekeke kwinqanaba ngalinye lokukhula kwesityalo. Ngokomzekelo, kwiinyanga ezi-3-5 zokuqala, kuyacetyiswa ukuba ngamaxesha athile achumise izityalo ngomgquba oluhlaza. Ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-6 ukuya kunyaka om-1, izichumiso ze-NPK zingasetyenziselwa ukunceda izityalo zikhule ngcono.
Ukucoca kunye nokuthena amasebe
Rhoqo ucoca, ubulale ukhula kwisiseko somthi ukuze umthi ungatyi zonke izondlo zomhlaba. Kwangaxeshanye, ukuthena amagqabi awonakeleyo, abunileyo okanye angasebenziyo kunceda umthi ukhule ngokukhawuleza kwaye ube nokumila okuhle.
Ukuthintelwa kwezinambuzane kunye nezifo
Imithi ye-Bodhi ikholisa ukuba nezinambuzane kunye nezifo ezincinci kuneminye imithi emininzi. Ezinye izinambuzane ze-Bodhi ngamagqabi, i-powdery mildew, i-stem borers, izigcawu ezibomvu, njl njl. Ukuthintela ezi zinambuzane, kufuneka unakekele izityalo ngokwemigangatho engentla.
Nangona kunjalo, le ndlela ilinganiselwe kuphela, kuba eneneni umthi usazonakaliswa zizinambuzane. Ngoko ke, ungasebenzisa i-insecticides ezifana ne-regent yokubulala i-stem borers, i-spray i-Anvil, i-Score, i-Topsin M … ukukhusela isifo se-powdery mildew, njl. Ukongeza, isityalo sinokubandezeleka kwisifo seqabunga eliphuzi, xa ulufuna. Nika ingqalelo ukujonga ubungakanani bamanzi, ubushushu, ukukhanya kunye nesondlo ukuze ubone ukuba kufanelekile.
Ngexesha elifanayo, kufuneka ukhangele rhoqo, unakekele, ukhangele ngexesha elifanelekileyo kwaye uqonde imeko yomthi ukuthatha amanyathelo okukhusela asebenzayo.
Lithini ixabiso lokuthengisa lomthi weBodhi?
Umthi weBodhi uthandwa kakhulu eVietnam. Ixabiso lomthi we-bodhi liyahluka ngokuxhomekeke kubukhulu, ubudala kunye nokumila komthi. Ngokumalunga nexabiso lembewu, lihlala liguquguquka kwi-20,000 – 25,000 VND. Kwimithi yeBodhi eqhelekileyo, encinci ngobukhulu, ayifani kakhulu, ixabiso liya kuvela kwi-200,000 VND / umthi okanye ngaphezulu.
Nangona kunjalo, kukho imithi emihle kakhulu kwaye inqabileyo, ixabiso lomthi liya kuba phezulu kakhulu, rhoqo i-bonsai connoisseurs iya kukhangela le mithi. Kwaye ixabiso lemithi ye-bodhi enqabileyo inokuba zizigidi ezininzi zeedong, amakhulu ezigidi zeedong okanye ukuya kuthi ga kwiibhiliyoni zeedong ngokuxhomekeke kwinqanaba. Amaxabiso endiwanikezelayo abhekiselele kuphela, kuba awalungiswanga kodwa atshintsha ngokusekwe kwizinto ezininzi.
Ngokuphathelele indawo yokuthengisa umthi we-bodhi, ngoku sinokuwuthenga lula umthi kwiindawo zokuhlala okanye kwiivenkile zemithi ezifumanekayo ngexabiso elifanelekileyo. Ukuba ufuna ukufumana imithi ye-bodhi enqabileyo, kufuneka udibane kakhulu nabadlali bemithi abanamava okanye amaqela athandwayo e-bonsai.
Oku ngasentla kubandakanya lonke ulwazi oluluncedo olunxulumene neBodhi, kukunceda ukuba ukhethe imodeli yomthi efanelekileyo kuwe.
>> Bona ngakumbi: Umthi weBanyan – iimpawu, ukutyala kunye nokunyamekela
Cây Bồ Đề – Cây xanh công trình, cây cảnh bonsai đẹp | Hatgiongtihon.net
Công dụng, cách dùng Bồ cu vẽ | Hatgiongtihon.net